IIYURE ZONYAKA OMTSHA ZECHIPOTLE: NGABA IVULIWE OKANYE IVALIWE 2020-2021? - IINDABA
Iiyure zeChipotle zoNyaka oMtsha: Ngaba ivuliwe okanye ivaliwe 2020-2021?
Ukuba unqwenela ukonwabela i-Chipotle ku-Eva woNyaka oMtsha okanye uSuku loNyaka oMtsha, ngoku ke sineendaba ezilungileyo. I-Chipotle ivulekile imihla ngemihla, kodwa ngokuqinisekileyo ivala kwangoko ku-Eva woNyaka oMtsha.
I-Chipotle ivala kwangoko nge-Eva yonyaka omtsha ka-2020
Umcebisi ovela kwi-Chipotle uqinisekisile nge-Heavy ukuba indawo nganye yokutya ye-Chipotle iya kuvalwa kwangoko ngoLwesine, nge-31 kaDisemba nge-8. ixesha lokuzalwa.
Oku kuyabavumela abasebenzi ukuba babe noko babe nexesha elimnandi uEva woNyaka oMtsha, ngelixa ukongeza ukubonelela ngeChipotle kubantu abafuna oko ngaphambi kokukhala ngaphakathi kuNyaka oMtsha. Ke ukuba kunokwenzeka ukuba ufuna i-Chipotle ku-Eva woNyaka oMtsha, qiniseka ukuba uyeka kwangoko kwangoko kunokuba uvale okanye ungene kwi-odolo yakho yokubonelela kwangoko.
I-Chipotle ivulekile ngomhla woNyaka omtsha ka-2021
Umcebisi ovela kwi-Chipotle uqinisekisile ngo-Heavy ukuba indawo nganye ye-Chipotle iya kuvulelwa iiyure zakhe zeshishini eliqhelekileyo ngoSuku loNyaka oMtsha ka-2021.
Ngokungafaniyo noSuku lweKrisimesi, xa i-Chipotle ivaliwe, zonke iindawo ziya kuvuleka ngoMhla woNyaka oMtsha. Olu lwazi oluhle ukuba awunqweneli ukulungiselela isidlo sangokuhlwa ngoNyaka oMtsha, nangona kunjalo ungathanda ukonwabela iChipotle njengenye indlela. Zonke izinto ezikhethiweyo zikaChipotle ziya kufikeleleka kwakhona, kunye ne-barbacoa, hen, i-steak, i-carnitas, i-veggies kunye nokunye.
I-Chipotle okwangoku ibonelela ukuthengisa onokufumana ukuba kunokwenzeka ukuba uyayithanda imodeli. Ezi zii tee ezimnandi, iibhatyi, iintloko, izixhobo ezinamandla kunye nemithwalo. Okwangoku ukhetho luquka ibhatyi yebomber, iPepper Jean Jacket, iavokhado Jean ibhatyi, kunye nezikipa ezithile ezineentetho ezahluke mpela, ezifana ne-odolo tee tee, ipepile yepeyinti tee, itrokhi ye-burrito, iti eyongezelelweyo , kunye nee tees ezifunda nje chipotle ekungeneni. I-Chipotle ikwanazo neehempe ezinamaqhosha, iihempe ezixhonyiweyo, iimpahla zempahla evekini, iisilayidi ezinemixholo ye-Chipotle, imithwalo ye-foil duffle, i-Chipotle-themed leggings, iibhotile zamanzi ezinemixholo, ibhulukhwe ye-pajama, kunye nabagijimi beChipotle.
Joyina i-Chipotle Rewards yee-Specials kunye nokufumana amanqaku
Ukuba uyinxalenye Imivuzo yeChipotle , unokufumana izinto ngaphandle kweendleko zokutya kwiindawo zokutya zeChipotle kuyo yonke indawo. Uya kufumana imiba ngayo yonke into oyithengileyo kwaye uyakufumana ukothuka kusuku lwakho lokuzalwa.
Ngemivuzo yeChipotle, uyakufumana amanqaku ali-10 kwidola nganye oyichithile, kwaye uya kufumana mahala i-Chipotle nanini na xa ubetha izinto eziyi-1250 (ngalo lonke ixesha. ukuzama into enye entsha. Ke lawula umvuzo ngokukhethekileyo onokubonelelwa kube kanye ngexeshana.
Chipotle ’s Iakhawunti ye-Instagram Ukongeza iiposti ezizodwa kanye ngexesha ongekhe ubone enye indawo. Ke le nto inokuba yiakhawunti elungileyo ukuba uyiqwalasele ukuba kunokwenzeka ukuba ukhangele izinto ezizodwa.
I-Chipotle ibithengisa ukutya okukhuselekileyo kwe-COVID-19 kunye nesizathu sokuba ubhubhane uqale.
Ngaba iipakeji ziyahanjiswa ngombulelo
Nxiba iimaski. Yitya burritos. (Hayi ngexesha elifanayo lol) #GuacIsExtraButSoIsMiley pic.twitter.com/9r5LmYinrr
-Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) NgoDisemba 11, 2020
Ungaphonononga onke amanyathelo okhuseleko Apha . Amanyathelo okhuseleko afaka isicoci sezandla kubakhenkethi, iimaski zobuso kuwo onke amalungu eqela labasebenzi, ukuhlamba izandla isiqingatha seyure, kunye negosa lokutya elizinikeleyo lokuqinisekisa ukucocwa okuzinzileyo kunye nokunceda ekuphambukeni eluntwini. Ukuthathwa okungafumanekiyo ekunikezelweni ngononophelo kunye nokubonelela ngonikezelo nangona kunjalo kuyafikeleleka kubaxhasi, kunye nemithwalo ebonakalayo ebonakalayo eneempawu zokupakisha kunye nokuhlolwa kwempilo yabasebenzi yonke imihla.
Izigaba: Iindaba Tech-Iindaba Iwiki
intshontsho le-4 iiyure zikaJulayi
I-publix 4 kaJulayi iiyure
I-steve easterbrook yenani elifanelekileyo le-2019
Ujames brolin obalaseleyo kwi-movie
xa ubiza intliziyo ingqondo media